408 Codsi Wakhtiga (Waa Maxay & Sida Loo Xakameyo)
Internet & Shabakad Fariin qalad ah
Sidee loo Xaqiijiyaa 408 Codsi Wakhtiga Xiliga
Hababka loo Xaqiijiyo 408 Codsi Waqtiga Codsiga
408 Codsiga Waqtiga Codsiyada Wakhtiga Xeer waa HTTP taas oo macnaheedu yahay codsiga aad u dirtay server-ka shabakadda (sida codsi ah in lagu dhajiyo bogga internetka) ayaa qaatay muddo ka badan server-ka server-kiisa oo diyaar u ah inuu sugo. Si kale haddii loo dhigo, xiriirka aad la leedahay websaydka "wakhtiga la soo dhaafay."
408 Codsiyada farriinta qalabka waqtiga badan ayaa badanaa lagu soo rogaa bog kasta oo kasta, gaar ahaan kuwa aad u ballaaran, sidaa darteed maskaxda ku hay in qaladkaasi uu siyaabo badan u soo bandhigi karo kuwa ugu liita ee hoos ku taxan:
408 Codso Wakhtiga Xawilaadda HTTP 408 - Wakhtiga Codsiyada
408 Codsiga Wakhtiga Codsiyada Timeout wuxuu soo bandhigaa gudaha daaqadda internetka, sida bogaga internetka.
Sida loo Xaqiijiyo 408 Codsiga Wakhtiga Timeout
Dib u celi bogga internetka adiga oo riixaya badhanka dib u cusbooneysiin / badhanka ama isku dayga cinwaanka cinwaanka cinwaanka mar kale. Marar badan oo xiriirka gaaban wuxuu keenaa dib u dhac ku yimaada qaladaadka 408 Codsiyada Timeout Request waxaana badanaaba ku meel gaar ah. Mar labaad raadinta bogga badanaaba waa ku guuleystaan.
Fiiro: Haddii farriinta qaladka ah ee 408 Codsiga Wakhtiga soo baxa inta lagu jiro nidaamka lacag bixinta ee ganacsiga internetka, la soco in isku dayga isku dayga ah ee baadhitaanka laga yaabo inay dhameeyaan abuurista amarro badan - iyo lacago badan! Ganacsatada intooda badani waxay leeyihiin ilaalo toos ah oo ka yimaada ficilladan noocaas ah laakiin weli waa wax maanka ku haya.
Waxaa laga yaabaa inaad la kulanto arin aad la xiriirto internetka taasoo sababeysa dib u dhac waqti dheer markaad bogsashada galeyso. Si aad tan u xukuntid, booqo bogga kale sida Google ama Yahoo.
Haddii boggaga sida ugu dhakhsaha badan loo isticmaalo si aad u aragto culeyska, arrinka keenaya qaladka 408 Codsiyada Timeout waxay u badan tahay inuu ku yaal websaydhka.
Haddii dhammaan websaydhadu ay tartiib tartiib u socdaan, si kastaba ha noqotee, xiriirintaada internetka ayaa laga yaabaa inay arrimo ku saabsan Samee tijaabinta xawaaraha internetka si loo qiimeeyo xawaarahaaga xaadirka ah ama la xiriir Adeegbixiyahaaga Internetka si taageero farsamo.
Dib u soo noqo. 408 Codsiga Wakhtiga Timeout waa fariin qalad ah oo ku saabsan website-yo aad u jecel marka koror ballaadhan ee gaadiidka ay soo booqdaan (taasi waa adiga!) Ay ka weyn tahay server-yada.
Maadaama booqdayaasha badankood ay ka tagayaan website-ka, fursadaha bogga guuleysta ee aad ku kordhinayso.
Haddii dhammaantood ay ku guuldareystaan, waxaad u baahan kartaa inaad isku daydo inaad la xiriirto websaydhka ama meel kale oo la xiriirto oo aad u sheegto fariin qaldan ee 408 Request Timeout.
Websaydhka websaydhada intooda badan waxaa lagu soo marin karaa email ahaan emailka webmaster @ website.com , bedelida website.com oo leh magaca dhabta ah ee bogga.
Khaladaadka Sida Loo Weydiiyo 408 Codsi Wakhti
Fariimaha soo socda ayaa sidoo kale ah khaladaadka macaamiisha iyo sidaas oo kale waxay la xiriiraan qaladaadka 408 Codsi Wakhtiga: 400 Codsi Badbaadin , 401 Ogolaansho , 403 Khilaaf , 404 Looma Helin .
Qaar ka mid ah lambarada server-ka ah ee HTTP ayaa sidoo kale jira, sida caadiga ah ee la arkay 500 Internal Error Error , oo ka mid ah dhowr kale. Eeg dhamaantood iyaga oo ku jira liistada Xeerka Xaaladda ee HTTP .
Sida loo Xaqiijiyo 404 Aan La Helin Khalad
Sida loo Xaqiijiyo Macaamiisha iyo Server Sidee VPN Error 800
"Ku xiran Helitaanka Xaddidan" Cilladaha Windows
Dhibaatooyinka Dhibaatooyinka Isku-xirka Internet-ka
Waxa la Sameynayo Marka Jid 'Waddada Joogitaanka' La Helin 'ayaa ka dhacda Windows
Sidee loo Xaqiijiyaa 401 Qalab aan La Ogeyn
Nidaamyada VPN Error Explained
Xalalka loo yaqaan "Fariimaha Khaladka Nidaamka Isgaadhsiinta"
30-30-30 Xeerka Dib-u-Soo-celinta Dib-u-hagaajinta loogu talagalay Routers Explained
Saints Row khiyaanada iyo siraha loogu talagalay Xbox 360
Qeexitaanka MNO: Waa maxay MNO Cell Phone?
Sida loo Helo Xisaab Yandex.Mail ee Barnaamijyada Email Isticmaalka IMAP
Goobaha Maqnaanshaha Maqaaxa Sare ee ugu Fiican Meelaha iyo Qalabka
6 Safaaradaha Biyaha Biyaha Badan ee ugu Wanaagsan si ay u iibsadaan 2018
Doorashada 12 kuleyliyaha kuleylka
Sida Celebrities Isticmaal Sidaad uhadalka ah si aad u hesho Lacagaha Warbaahinta Bulshada
The Ultimate Windows 7 iyo Ubuntu Linux Dual Boot Guide
Cusbooneysiinta Sony Soodhawrka Heerka sare ee TV-ga 4K
Xayawaanka Shimbiraha ah ee Maqnaanshaha: Wolves!
Hordhaca Ereyga Microsoft iyo Codeynta Koodhka
9ka Xabbadood ee ugu wanaagsan Xbox One-ka ee lagu iibsado 2018
Daawo Barnaamijka Heerka Sare (HD)
35 Fidiyo si aad u shidato Chromebook-gaaga Powerhouse
Ku dar MP3 Dukumiintiyada Shabakadaha
OS X Mail 9 - Barnaamijka Macmacaanka Mac
Kala-duwanaanta Muuqaalka Maskaxeed - Qaybta 2aad
Ciyaarta Quod Libet Audio Player
Sidee Badanaa Ugu Bixisaa Kumbuyuutarkaaga?